Itoobiya iyo Ereteriya oo heshiis ku kala saxiixanaya magaalada Jiddah – AwKutub News
Itoobiya iyo Ereteriya oo heshiis ku kala saxiixanaya magaalada Jiddah
Leave a Comment on Itoobiya iyo Ereteriya oo heshiis ku kala saxiixanaya magaalada Jiddah
labada dal ee Ethiopia iyo Ereteriya ayaa ku tala jira inay heshiis nabadeed ku kala saxiixdaan magaalada Jiddah ee dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Sida ay faafisay warbaahinta maxaliga ah ee Sacuudiga, waxaa goobta heshiiskaasi ay labada dal ku kala saxiixanayaan ka qeyb galaya Boqorka Sacuudiga iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, waxaana xafladda saxiisa heshiiskaasi uu dhacayaa berito oo Axad ah.
Talaabadan ayaa imaaneysa kadib dadaalka ay labada dal uga jiraan soo celinta xiriirkooda oo muddo go’anaa, waxayna go’aansadeen inay soo afjaraan dagaalkii iyo cadaawadii u dhaxeysay, ka gadaal markii uu xukunka Ethiopia la wareegay R/wasaare Abi Ahmed.
Sidoo kale laba dal ayaa si rasmi ah dib ugu furay xuduudooda iyagoo eegaga masaalixdooda iyo tan shacabka ay labada hogoomiye madaxda ka yihiin.
Sanadkii 1998 dii ayay aheyd markii Ethiopia iyo Ereteriya uu ka dhex qarxay dagaalka oo ay labada dhinac uga dhinteen askar iyo dad aad u fara badan, wuxuuna dagaalkaasi ahaa kii ugu dheeraa ee Afrika wadamo ka tirsan ka dhaca.
Tags: Ereteriya Itoobiya Sacuudiga Wararka
Previous Entry Erdogan iyo Putin oo ka shiraya arrinta Suuriya
Next Entry Aqal Sare oo soo saaray Liiska Wufuuda loo dirayo Maamul Goboleedyada